May 2022 – Grab Love Story
ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ် ( စ / ဆုံး )
( သက်ဆိုင်သူအားလုံးသို့ )ကျွန်တော်အမည်ကိုမျိုးပါ ကားဝယ်ရောင်းလေးလုပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လုပ်ငန်းက မပင်ပန်းပေးမဲ့ တစ်ခါတလေ မနားရဘူးဗျ။ ကျွန်တော်လဲ အညှောင်းမိနေတာနဲ့ အိမ်မှာအနှိပ်သည် ဦးလေးကြီးကိုခေါ်နှိပ်လိုက်မိတယ်ဗျာ အဲဒီကဇာတ်လမ်းစတာပဲဗျို့။မိန်းမကအသက်(၂၇) ကျွန်တော်ထက်(၄)နှစ်ငယ်တယ် သူရဲ့ပုံစံက အရပ်မြင့်မြင့်နဲ့အခု အမည်ကြီးနေတဲ့မေပန်းချီ တို့ဆိုဒ်ဗျ ဖင်ကားကားနို့ထွားထွားနဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အမေပါ။ သူကအသားဖြူတဲ့အထဲတော့မပါဘူး အသားရေတော့လှတယ် ခြေမွေးလက်မွှေးတွေနဲ့ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းတယ်။ဏှာကလည်းဘာကြီးသလဲ မမေးနဲ့ အပေါ်ကနေတတ်ပြီးသူ့ဖင်းကြီးကြီးနဲ့ …
ကျမအမည်မှာ နှင်းယုမာဟုခေါ်ပြီး အသားဖြူဖြုခါးကျဉ်ကျဉ်ဖင်ကောက်ကောက်လေးနှင့် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ဖြောင့်စင်းလှပသူလေးဖြစ်ပါသည်။ကျမဘဝတွင် ရည်းစား၅ယောက်ထားခဲ့ဖူးရာ ၂ယောက်နှင့်သာအတူနေဖူးပြီး ရည်းစားမဟုတ်သူ သူစိမ်းများနှင့်ပိုပြီးအချခံခဲ့ရသည်။နောက်ဆုံးလင်ရသည်ထိ ထိုကံမျိုးပါခဲ့သည်။ ကျမသည်ရည်းစားများခဲ့ရ လူစိမ်းများနှင့်အလိုးခံခဲ့ရသော်လည်းသော်လည်း ပွေချင်ရွုပ်ချင်သူမဟုတ်ပဲ သာမန်ရိုးရှင်းသည့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်သာဖြစ်ချင်ခဲ့သည်။ ကျမအပျိုဘော်ဝင်စအရွယ်တွင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိမိန်းကလေးတိုင်းကဲ့သို့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ ရည်းစားထားရမည့်အရွယ်တွင် ရည်းစားထားသည်။ထိုအခါ ကျမနှင့် ပတ်သက်ရသည့် ယောက်က်ျားများ၏ ကျမအပေါ် ဆက်ဆံမူ့များအရ ကျမမှာ အလိုးခံခြင်းဟူသောအရသာကို …
အိမ်မက်ထဲက စုံတွဲ (စ/ဆုံး)
ကျတော်က ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပါ။ နံမည်ကတော. အောင်မြတ်ပါ။ စစ္တပ္ကေန ပြောင်းလာတဲ. ဆရာဝန်ကြီးပေါ.ဗ်ာ။ အသက္ကေတာ. ၃၅ နှစ်ဗျ။ မိန်းမလား ရှိတာပေါ.၊ အသက် ၂၅နှစ်အရွယ် ဆရာဝန်မလေးပေါ.ဗ်ာ။ ကျတော်လား သူ.အရင် အများကြီး ထားခဲ.ဖူးတာပေါ. မယူတာပဲရှိတယ်။ လူကောင်ထွားထွား အရပ္က ၅ပေ၁၁လက်မ၊ ပောင်ချိန် ၁၆၀ …
မောင်ခြိမ့် [ အတွေးပင်လယ်ပြာတွင် ရေးသားသည်။ ] ( အခန်း ၁+၂+၃+၄ )နေ့လည် ၁၂ကျော်တာနဲ့ မစု လက်ဖက်သုပ်ဆိုင်လေး စဖွင့်ပါပြီ။သဘောကောင်း မနေကောင်း လက်ဖွာတတ်သူမို့ ညနေ ၆နာရီလောက်ဆို လက်ဖက်သုပ် မုန်လာချဉ်သုပ် မက်မန်းသီးသုပ် အကုန် ကုန်တာပဲ။အသက်၃ဝကျော်ပေမယ့် မျက်နှာသွယ်သွယ် ပုခုံးကျယ်ကျယ် ရင်သားထွားထွား …
တဆုံးထိုး၍ လိုးလိုက်ပါ ( စ / ဆုံး )
အိပ်ခန်းထဲမှာ မုန်တိုင်းကျနေသလိုထင်ရသည်။ဝါဝါမွန်တစ်ယောက် ကိုတင်မောင်ကျောပြင်ကို တင်းတင်းကြီးဖက်တွယ်ပြီး တဏှာပြင်းပြင်းနှင့် သူမကို တအုန်းအုန်း တဒိုင်းဒိုင်း အသံထွက်အောင် လိုးဆောင့်ပေးနေသော ကိုတင်မောင်၏ဆောင့်ချက်များကို အောက်ကနေ သူမဖင်ကြီးကော့ကာတစ်မျိုး ပင့်ကာတစ်သွယ်ဖြင့် စည်းကိုက်ဝါးကိုက်ဖြစ်အောင် ပြန်လည်ညှောင့်လိုးရင်း ပါရမီဖြည့်ပေးနေပါသည်။ကိုတင်မောင်ကား နေ့ခင်းကြောင်တောင် အချိန်ကြီးမှာပင် အလုပ်မှနေ၍ ထမင်းစားပြန်လာပြီး မယားချောလေးဖြစ်သူ ဝါဝါမွန်ကို တစ်ချီမရမက ဆွဲနေခြင်းပဲ …
သူတော်ချင်းချင်း သတင်းလွေ့လွေ့ လို့ဆိုရမည်လား၊ အဟမ်းအဟမ်း။ ဒီလိုအရပ်ဒေသရောက်နေတော့လည်း ငယ်ပေါင်းဆိုတာမျိုးက မရှိတော့၊ ငယ်ပေါင်းတွေ၊ ငယ်ကျိုးငယ်နာသိတဲ့သူတွေ၊ အချင်းချင်း အထင်သေးမှာ သိက္ခာကျမှာ ကြောက်စရာမလို ပြောချင်ရာပြောလို့ ရတဲ့သူငယ်ချင်းဆိုတာ ရှာမှ ရှားတဲ့ နေရာမှာ ရှားရှားပါးပါး၊ ငယ်သူငယ်ချင်းလိုပေါင်းလို့ရသည့်တကောင်နှင့်ဆုံမိသည်။ ဝါသနာတူချင်းမို့လည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ပထမ ကတော့ အရက်၊ အတူသောက်ဖြစ်သည်။ …